मतदाताहरु राजनीतिक दलका दास होइनन् – Hello Punarwas
On १३ बैशाख २०७४, बुधबार १४:३२
अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा बिभाजन गरेर यहि आउँदो वैशाख र जेठको ३१ गते हुने पक्का पक्की जस्तो नै देखिएको छ । गाउँ, शहर, चियाचमेना गृह र सिंहदरबारसम्म चुनाबी सरगर्मी ह्वात्तै बढेको छ । राजनीतिक दलहरु महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाका पदाधिकारी र सदस्यहरुको नामावली चयन गर्न अन्तिम कसरत गरिरहेका छन् । हाम्रोलाई हैन राम्रोलाई रोजौं भन्ने आदर्श बाक्यांशहरु फेरि पनि सुनिन् थालेका छन् । वि.सं.२००७ बाट राजनीतिको स्वर्णिम आधुनिक युगपछि ६७ वर्षको दौरानमा ४८ वटा सरकारको फरक–फरक सिद्धान्त र अश्वासनका मीठा स्वादहरुप्रति जनताहरु पनि भुक्तभोगी भएकै छन् । जनताले यो समयावधिभरी प्रत्यक्षरुपमा सहभागी भएर एउटा दिगो शान्ति, विकास र समृद्धिका समान सपनाहरु पनि देख्दै आएका छन् ।
हरेक चुनावमा काठमाडौंबाट पुनर्वास र बेलौरीमा रात्रीबस गुड्दछ र चिल्लो गाडीहरुको अगामनसँगै नेताहरुको आवात–जावत पनि बाक्लिदै जान्छ । गुड्नेदेखि उड्नेसम्मका यातायातहरुमा नेता जीहरुकै बर्चश्व कायम भएको हो की यस्तै प्रतीत हुने गर्दछ । स्वागतका लागि लामबद्ध जनताहरु स्वागतम्का तूल र पुष्प गुच्छा अर्पण गर्न तम्तयार देखिन्छ । पुनर्वास र बेलौरीका प्राङ्गणहरुमा थुप्रै आमसभाहरु, मीठा, रसिला भाषण भीषणले ब्यापकता पाउँने गर्दछ । मनै रसाउने विकासका रमाइला कथाहरु विश्वास लाग्दो तारिकाले जनता सामू सुनाइन्छ । एक छिन जनताहरु काल्पनिक विकासको दुनियाँमा घुम्छन् र मख्ख पर्छन् । तालीको गड्गडाहट्ले आफ्नो अपूर्व खुशी व्यक्त गर्छन । लाग्छ पुनर्वास, बेलौरी नेपालको सुदूर बिकटको कुना कन्दरामा हैन कुनै विकसित क्षेत्रमा अवस्थित छ । तर वास्तविकता अर्कै छ, जब वर्षायाम लाग्छ, सदरमुकाम जानेबाटाहरु पूर्णरुपले हिलाम्य र अबरुद्ध हुन्छन् । कैलालीको धनगढी र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर पुनर्वासी र बेलौरीबासीको लागि दूरुह र असम्भव बन्न पुग्दछ । इमर्जेन्सी उपचारमा लानु पर्ने विरामीहरु बाटोघाटोको अभाबमा उपचार नपाई मर्न बाध्य हुन्छन् । अकालमै मृत्युबरण गर्नु पुनर्वासी र बेलौरीबासीको अर्काे एक खासियत बन्न पुग्दछ । कञ्चनपुरको दक्षिणी भेग विशेष गरेर पुनर्वास र बेलौरी भन्ने ठाउँ, आफ्नै देशको भूमि भएर पनि नेपालको कुनै भू–भाग नै नभई अर्कै कुनै अञ्जान ग्रह हो । जस्तै नेपालसँग कुनै सरोकार नै छैन । सरोकार राख्नु पर्ने सरोकारवालाहरुको अत्यन्तै खडेरी पर्छ जब पुनर्वास र बेलौरी एउटा टापुमा परिणत हुन्छ । पहूँच र शक्तिशाली भनी धक्कू लगाउँने नेतागणहरु यति बेला कता बिलाउँछन् कता ? पुनर्वास र बेलौरीमा थुप्रै राजनीतिक दलहरु सक्रिय छन् । सत्तासम्म पँहूच भएको दाबी गर्ने थुप्रै व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रमामा । पुनर्वास र बेलौरीको लागि नै आफ्नै पाटी र आफू भनेर नथाक्ने आदरणीय नेता जीहरु यहाँ छ्यापछ्याप्ती भेटिनुहुन्छ । तर खै ! सदरमुकामसँग जोड्ने बाटोलाई बाह्रै मास चल्ने कालोपत्रो बनाउन र डोके बजारदेखि पुनर्वास जोड्ने बाटोलाई कालोपत्रे बनाउने काम कहिलेबाट शुरु हुने हो ? हरेक वर्षायाममा हामी नेपालको मुख्य भूमिबाट कतिञ्जेल छुटिएर बस्नु पर्ने हो ? इमर्जेन्सी उपचार नपाएर कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रका जनतााहरु कहिलेसम्म अकालमै मर्नु पर्ने हो ? आफ्नो स्वाभिमानी शीर झुकाएर कहिलेसम्म भारतीय एस.एस.बी.को अत्याचार सहेर बाँच्नु पर्ने हो ? के हाम्रा सत्तासँग पहूँच भएको दावी गर्ने नेताजीहरुसँग यसको उत्तर छ ?
जनताले अब यसको उत्तर खोज्ने बेला आइसकेको छ । बिगतमा जनतालाई अनेकन लोभ र प्रलोभनको दलदलमा उभ्याएर राजनैतिक खेती गर्नेहरुको फसल, यो पटक पनि तयारी हालतमै देखिएको छ । तर सर्वसाधारण मतदाता पनि विगतको तुलनामा अहिले मतदान कसलाई गर्ने भन्ने विषयमा अत्यन्तै सचेत भइसकेका छन् । युवा हरेक परिर्वतनका संवाहक हुन, परिवर्तनका नाममा भएका क्रन्तिहरुमा युवाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको कुरा इतिहासले दर्शाएकैछ । नयाँ पिढी जो वर्तमान पिढी भन्दा हरेक क्षेत्रमा अब्बल छ । शिक्षा र राजनैतिक आधारमा हेर्ने हो भने आजको युवा निकै जागृत देखिन्छन् । राजनैतिक भट्टीमा खाहारिएर राजनैतिक चेतना भरेका युवा मतदाता अव देश विकास र निर्माणका लागि सही उम्मेदवार दलहरुले छनौट गर्न सके कि सकेनन् भन्ने कुरालाई सहजै खुट्याउन सक्ने भइसकेका छन् । दिगो शान्ति, समृद्धि अनि सुशासनको उनीहरुले अपिल गरिरहेका छन् । युवाहरुको अपिल बिरुद्ध दलहरुबाट सक्षम र योग्य उम्मेदवार छनौट गर्न सकिएन यदि भने उनीहरुको त्यो निर्णायक मत अन्य कतै मोडिन पनि सक्नेछ । राजनैतिक दलका कार्यकर्ता तथा मतदाताहरु कुनै पनि राजनीतिक दलका दास अवश्य पनि होइनन् । स्वतन्त्र नागरिकको हैसियत राख्ने त्यो युवा पिँढी तथा सर्बसाधारण मतदाताले आफ्नो अधिकार, भाग्य र भविष्य निर्माणको उपयोग यदि स्वतःस्फूर्तरुपमा स्वेच्छापूर्वक गर्छ भने त्यसलाई रोक्न अब कसैले पनि सक्नेछैन ।
शिक्षाका नाममा ब्रह्मलुट